Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay Go’aan CULUS iyo Digniin loo diray…. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay Go’aan CULUS iyo Digniin loo diray….
Ardaan Yare 6 March 2021 6 March 2021
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ka hadlay weerarkii qaraxa ku bilowday ee habeen hore Al-shabaab ku qaadeen Xabsiga weyn ee Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari.
Madaxwyne Deni oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay inuu ka xun yahay weerarkii ka dhacay Boosaaso, isagoo tacsi u diray dadkii ku geeriyooday weerarka oo uu si rasmi ah u shaacin tiradooda.
Waxaa uu sheegy Saciid Deni in Maamulka Puntland uu jawaab ka bixin doono weerarkii Al-shabaab ku qaadeen Xabisga weyn ee Boosaaso, ayna heegan buuxa geliyeen Ciidanka ammaanka Maamulka.
“Puntland waxay kujirtaa heegan buuxa, ficilka dhacayna sida ugu wanaagsan baan uga falcelinaynaa, dadkay ku cadaato inay qayb ka ahaayeena waxaan rajeyn inaan ka abaal marino oo wajibkooda la mariyo” ayuu yiri Saciid Deni oo ka hadlaayay weerarkii dhacay.
Sidoo kale shacabka kunool Magaalada Boosaaso ayuu Madaxweynaha Puntland ugu baaqay inay la shaqeeyaan laamaha amniga Magaalada, si looga hortego falalka amni darro ee dhacay, looga baahan yahay wadashaqeyn.
Ugu dambeyn Ciidanka Puntland ee fashiliyay weerarkii lagu qaaday Xabisga Dhexe ayuu u mahadceliyay, wuxuuna tilmaamay inay Jawaab ka bixiyeen weerarka dhacay, isagoo caddeeyay inay wadaan baaritaano la xiriira weerarka oo cidii ku cadaato ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan.
Weerar naxdin leh oo ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb iyo khasaaro…
Dad hor leh oo Cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Magaalada Muqdisho